Singer Reshma Sunuwar - interview
Topic: Singer Reshma Sunuwar - interview
Author Topic: Singer Reshma Sunuwar - interview (Read 6553 times)
« on: December 26, 2009, 03:10:33 AM »
"मेरा पाँचदेखि ६५ वर्षसम्मका फ्यान छन्"
गायिका रेश्मा सुनुवार आफू भने युवा सभासद् गगन थापाको फ्यान भएको बताउँछिन्
मै ठूली भइछु रे, आइदेऊ घुम्टो ओढाइदेऊ' बोलको सेमी पपगीतबाट रेश्मा सुनुवार गायिकाका रूपमा चर्चामा आइन् । यही गीतले आफूलाई नाम, दाम तथा सम्मान दिलाएको बताउने गायिका सुनुवार भन्छिन्, 'दामबाहेक पनि दर्शक श्रोताबाट कल्पनै नगरेको माया पाएँ ।'
०५६ सालमा पहिलोपटक मलाई मायाले बाँध बोलको गीतबाट गायनयात्रा सुरु गरेकी उनले अहिलेसम्म ७० भन्दा बढी गीत गाइसकेको बताउँछिन् । तीमध्ये मै ठूली भइछु रे जस्ता अरू गीत चर्चित भएनन् । ०५९ मा 'रेश्मा' नामक एल्बम निकालेपछि औपचारिक रूपमा गायनमा उत्रिएकी उनी ०६४ मा मै ठूली भइछु रे नामक एल्बमको शीर्षगीतबाट गायिकाका रूपमा चिनिन सफल भइन् । यही गीतबाट इमेज अवार्ड, कन्तिपुर एफएम बेस्ट पप फिमेल भोकल अवार्डलगायत दर्जन पुरस्कार पाएकी रेश्मा गीत गाउने क्रममा अमेरिका, हङकङ, जापानलगायत दर्जन देश पुगिसकेको बताउँछिन् । भन्छिन्, 'एउटै गीतबाट माथि उठ्न सकिने रहेछ । तर, गीत भने सुपरहिटै हुन पर्दाेरहेछ,' आफूले गाएका अन्य तीन/चारवटा गीत चर्चामा आए पनि लोकपि्रय बन्न नसकेको अनुभव छ उनको ।
मै ठूली भइछु रे...गीतको भिडियोमा छमछमी नाचेकी रेश्माको स्वर तथा मुहारबाट पाँच वषर्ीय बच्चादेखि लिएर ६५ वर्षका वृद्ध युवकसमेत प्रभावित भई आफ्नो फ्यान बनेको अनुभव उनले सुनाइन् । 'कसैले रगतले लेखेको चिठी पठाए । कसैले तिमीलाई पाइनँ भने म जे पनि गर्छु भनेर धम्काए । कोही भने पोखरा, धरानदेखि मलाई खोज्दै काठमाडांै आए ।' आफू निकै लोकपि्रय भएको बताउँदै उनले थपिन्, 'यत्तिको चर्चित हुँला भन्ने मैले कहिल्यै कल्पनासम्म गरेकी थिइनँ ।'
तिम्रो गीत र तिमीलाई मन पराउँछु भन्नेहरू थुप्रै भएकोे बताउदै उनी भन्छिन्, 'माया गर्छु भन्ने त कति छन् कति । गनिसाध्य छैन ।' पोखराबाट एकजना ६५ वर्षीय 'फ्यान' उनलाई भेट्नकै लागि काठमाडांैसम्म आए रे । 'फोन, चिठी, इमेल, एसएमएस त कति आउँछन् आउँछन् । मेरा धेरै फ्यान छन्,' उनले भनिन् ।
फ्यान धेरै भएको दाबी गर्ने रेश्माचाहिँ कसकी फ्यान होलिन् ? उनी आफ्नै स्वरकी फ्यान हुन् ? या कुनै चर्चित सेलीब्रेटीकी फ्यान ? तर, होइन रहेछ । उनी त परिछन् कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद् गगन थापाकी फ्यान । आफू सभासद् थापाको फ्यान हुनुमा पार्टीगत आस्था तथा सम्बन्ध नभएको बताउँदै उनले भनिन्, 'मलाई गगन थापाको व्यक्तित्व मन पर्छ ।' उनको फ्यान हुँदैमा आफू कांग्रेस कार्यकर्ता नभएको दाबी गर्दै भनिन्, 'भाषण कला, व्यक्तित्व तथा उनको प्रतिभादेखि साह्रै प्रभावित छु । अरू केही होइन ।'
अहिलेसम्म पाँच हजार बढी आफ्ना फ्यानसँग भेटघाट र अटोग्राफ दिइसकेको बताउने उनले आफ्नो 'आइडल' सँग भेट्दा के माग गर्छिन् होला त ? कि त उनलाई फ्यानले भेट्दा राख्ने गरेका प्रस्ताव, अटोग्राफ प्लिज, सँगै फोटो खिचौँ अनि अलि आँटिलाले हतारमा गरिहाल्ने एक किस । तर, होइन रहेछ । उनले त अहिलेसम्म आफ्नो आइडल सभासद् थापालाई प्रत्यक्ष भेटेकी पनि छैनन् रे । 'कामै छोडेर भए पनि उनको भाषण सुन्नचाहिँ गएकी छु । तर, उहाँसँग प्रत्यक्ष्ा भेटघाट, चिनाजानी भने भएको छैन ।' कुनै दिन उनीसँग भेट भयो भने उनले के माग्लिन् त ? कि उही अटोग्राफसँगै फोटो खिच्ने अफर या एक...। तर, होइन रे । उनी गगनलाई सुझाव दिने चक्करमा रहिछन् । भनिन्, 'देश निर्माणका लागि अझ सशक्त भएर अघि बढ्नुस् भन्ने सुझाव दिने विचार छ ।' कुनै नेतृझैँ धाराप्रवाह बोल्दै गइन् उनी, 'गगनजस्ता युवाले राज्य सञ्चालनको तहमा स्थान पाएमा देश राम्रो बन्छ । यस्तै जोसिला युवाको खाँचो छ देशलाई ।'
विवाहित, १३ वषर्ीया एक छोरीकी आमा उनले कलाकारिताका लागि उमेर तथा घरपरिवार बाधक नहुने बताउँछिन् । उनले पुस अन्तिममा आफ्नो नयाँ एल्बम 'ल्यान्ड माइसिक्स' बजारमा ल्याउन लागेकी छिन् ।